အမွှေးနံ့ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အမွှေးနံ့ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်
Posted by etone on Oct 27, 2010 in My Dear Diary | 8 comments
နာရီသံကတစ်ချက်ချက်နဲ့ရွှေ့လျားနေသည် အချိန်ကား ဆယ့်တစ်နာရီလေးဆယ် …..
အိပ်ချင်လာသယောင်ဖြစ်နေသောကြောင့် ကော်ဖီပူပူးလေးတစ်ခွက်ထဖျော်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ စာကြည့်စားပွဲကိုပြန်ထိုင်စာကျက်ဖို့ ပြင်ပါတယ် ။ တစ်ညနေလုံးစာထိုင်ကျက်ရတာငြီးငွေ့နေသော်လည်း မဖြစ်မနေစာကျက်ရမည်ဟုစိတ်တင်းကာ အာရုံစုစည်းပြီး စာကျက်နေပါတော့တယ်။ အိမ်ရှိအိမ်သားများအားလုံး အိပ်နေပေပြီ ။ ညကလည်း ပိုပို၍ညဉ့်နက်လာသည် စာတိုးတိုး ညည်းသံကလွှဲ၍ တခြား ဘာအသံမှမကြားရအောင်ပင် တိတ်ဆိတ်လွန်းလှသည် ။ ညနေကတည်းက ထိုင်ကျက်နေရ၍ညောင်းချိနေသဖြင့် စာကျက်တာ ခဏရပ် ခါးကိုနည်းနည်းမတ်ပြီး လက်ဆစ်တွေကိုတဖျောက်ဖျောက်ချိုးမိပါတော့တယ် ။ ကော်ဖီနံ့သင်းသင်းလေးကို ရှုရှိုက်ရင်း နံရံပေါ်က နာရီကိုကြည့်တော့ ဆယ့်နှစ်နာရီစွန်းစွန်းဖြစ်နေပြီ သန်းခေါင်ယံတောင် ကျော်ပါပကောလား… ။
ဟူး…….. သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး တခြားဘာသာရပ်တွေဆက်ကျက်ရန်စာအုပ်တွေလှန်လှောရင်း… ရှူရှိုက်မိလိုက်သည်က အနံ့သင်းသင်းလေးတစ်မျိုး သေချာတာက ကိုယ့်ဆီကမဟုတ်တာ ….။ ဘယ်သူများတရေးနိုးကြီးထပြီးရေမွှေးဆွတ်ပါလိမ့်…. “အမ်….ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူး ။အားလုံး အိပ်နေဆဲပါလား … “မွှေးနံ့လေးက မွှေးဆဲ ..။ Etone သာမန်အားဖြင့်ရေမွှေးနံ့ပြင်းပြင်းတွေ မကြိုက်တတ်…။ ဒီတစ်ခါအနံ့လေးကိုတော့ တ၀ကြီးစိတ်ကြိုက်ရှုမိလိုက်သည် ..။ အသက်ရှူသံနဲ့အတူ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ တဖြည်းဖြည်း မြင့်လာတာ သတိထားမိမှ မမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက် အနံ့ပေးနေမှန်းသတိထားမိတော့သည် ။ ပရလောကသားလား နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လား…ဥစ္စစောင့်လား.. သတိမထားမိသေးခင်မှာပဲ ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီး အိပ်ခန်းထဲ ဒရောသောပါး ပြေးဝင်ခဲ့သည်။ မီးတောင်မဖွင့်မိပဲ ကုတင်ပေါ်တွင် စောင်ခေါင်းမြီးခြုံကာ အနံ့ရသေးလားဟု ရူနေမိသည် …။ အဲ့ဒီအချိန်တွင် ကြားရသော ရင်ခုန်သံသည် အကျယ်လောင်ဆုံး ဟုပင် ထင်ရသည် …. ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာကြာအထိ ကိုယ့်ရင် ခုန်သံ ကိုယ်နားထောင်မိသည် ပုံမှန်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြီးဟုသိရချိန်တွင် ခေါင်းမြီးခြုံအနေထားမှထ ကာ စူးစမ်းသယောင် အိမ်ရှေ့သို့ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည် ။
မိန်းမများဤ စူးဆန်းလေ့လာတတ်သောစိတ်အရ အနံရှိသေးလားဟု စာကျက်သည့်နေရာတွင် ပြန်ထိုင်ကာ အနံ့ကိုတ၀ကြီး ရှူလိုက်မိတော့မှ ……… အားပါးပါး ထုံသင်းအီနေတာပဲ ပထမဆုံးရတဲ့အနံ့ထက်တောင် ပိုများလာသေးတယ် ။ ကြောက်ကလည်း ကြောက် ပေမဲ့… တော်ကြာ အပုပ်နံ့ကြီးလွင့်လာရင် သွေးတတ်လဲသွားနိုင်သည် … တယောက်ထဲညသန်းခေါင်ကျော်တွင် သွေးပျက်နေသည်ကို ဘယ်သူမှမသိပါ … အဲ့ဒီအချိန်က အိမ်သားတွေကို နှိုးရမည်ဟု၊ နှုတ်မှအသံထွက်ရမည်ဟု ဘာကြောင့်များ မတွေးမိလဲ မစဉ်းစားတတ်တော့… ။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ … မမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ကို စကားပြောလိုက်သည် ။
“ကြောက်လို့ပါ အနံ့မပေးပါနဲ့တော့…ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပါတော့နော် … တကယ်ကြောက်လို့ပါ” စကားပြောသော်လည်း အသံတို့ထွက်မလာပဲ စိတ်ထဲမှပြောနေခြင်းသာ လူကတော့ ချွေးတွေစေးကပ်၍ မူးနောက်ကျိနေသည် ။ အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်ချင် နေသည် ။ သိတော်မူတဲ့အတိုင်း … ဗန္ဓုလသွေးပါသည် သိပ်မကြာပါ … အနံ့များပျောက်၍သွားတော့သည် …။
ဤသည်ကား etoneရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည် ။ လွန်ခဲ့သော ကိုးနှစ် ၊ ဆယ်နှစ်နီးပါး ခန့်ကဖြစ်သည်။10တန်း စာမေးပွဲ နီးသဖြင့် စာကျက်နေသော ညတစ် ညတွင်လည်း ဖြစ်သည် ။ ထိုအနံတစ်ခုထဲကိုပဲ အကြိမ်7ကြိမ် 8ကြိမ် ရခဲ့ဖူးသည် ။ အိမ်သားများ စုံနေချိန်တွင်လည်း ထိုအနံ့ရချိန်နှင့်ကြုံခဲ့ဖူးသည် ။ အကြိမ်အများစုမှာ ညဘက်တွင်သာရတတ်ပြီး… တစ်ခါမွှေးလျှင်အနည်းဆုံး 5မိန်စ်ခန့်မှ 45မိနစ်ခန့်အထိကြာမြင့်တတ်သည် ။ ယခုမူ အမွှေးရနံ့မရတော့သည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည် ။ နောက်ဆုံးရခဲ့သောအမွေးနံ့ မှာ လွန်ခဲ့သော ၆လခန့်က ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ အမွှေးနံ့သာရပြီး အရိပ်၊အသံ ဘာမှမပေးပါ ။ မမြင်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှပေးသော အနံ့ဟုပင် မှတ်ယူထားပါတော့သည် ။ ။
တချို့သရဲတွေက အီးမွှေးမွှေးလေး ပေါက်တတ်တယ်ပြောတယ်။
အဲ့သည် အနံ့ က နံသာဖြူ ကရမက်နံ့ ဟုတ် စ
အဲ့ဒီလိုအနံ့တွေမဟုတ်ပါဘူး ရေမွှေးနံ့ပါ ။ အမျိုးစားကောင်းရေမွှေးနံ့လိုတော့ ခံစားမိတာပဲ ။ အနံ့က ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ ရှူလိုက်ရရင် မူးနောက်မသွားဘူး အနံ့ပိုပြင်းလည်း စိတ်ကို လှူပ်ရှားကြည်နူးစေတယ် ..အဲ့ဒီလိုအနံ့မျိုး။
ပန်းနံ့ ကဲ့သို့ အမွေးနံ များ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ဆူး တို့ ကျောင်း သေးသေး တကျောင်း လှူတုန်းက မိသားစု ပနပ် ရိုက်ကာ အုပ်မြစ်ချတာ လုပ်ကြတယ်။ ထို အချိန်မှာတော့ ဘော်ဖလားနဲ့ သပြေရွက် ကလေးထည့်ပြီး ရေမွေးလေးများနှင့် ရေများ ထည့်ကာ.. ဟိုပက်ဒီပက် လုပ်ကြတယ်.. ဆောက်ဖို့ ပနပ် ရိုက်တယ် ဆိုတော့ မြေတူးထားတာဘဲ ရှိသေးတယ်။ ပနပ်ရိုက်အပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ မပြန်ခင် အိမ်သာသို့အသွား.. ထိုမြေတူးတားတဲ့ နေရာနားက ဖြတ်သွားတယ်.. သွားရင်းနဲ့ အမွေးနံ့ရလို့.. မွေးလိုက်တာလို့ ပါးစပ်က ပြောရင်းသွားပြီးတော့.. အိမ်သာထဲ ကပြန်ထွက်တော့.. ကိုယ်ဟာကိုလည်း ပြောလိုက်တာက.. ငါတော်တော် ညံတာဘဲ.. မွေးမှာပါ့.. ခုနက ဖလားကြီးထဲမှာ ရေမွေးတွေ ပါနေတာဘဲ.. အဲဒီက မွေးတာနေမှာပေါ့ ဆိုပြီး ပြောပြီး ထိုနေရာကနေ ပြန်ဖြတ်သွားတယ်.. ဘာအနံမှ မရတော့ဘူး.. ဒီလိုဘဲ နေရင်းနဲ့.. အိမ် အပြန် ကားပေါ်တက်မှ.. အနံ့ကစပြီး ရလာတယ်.. မြေတူးတဲ့ နေရာနဲ့ အနီးအနားမဟုတ်တဲ့ နေရာပေါ့. သဘောပေါက်လိုက်ပြီ.. အင်း ဒါက ဒီလိုကိုး ဆိုပြီးတော့.. အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အထိလည်း မွေးနေတာဘဲ.. စပါယ် ညမွေးကဲ့ သို့ မွေးကြိုင်သော ရနံ့မျိုး.. သေချာရှုရင် ပျောက်သွားတယ်.. ရှုနေတဲ့ လေမှာ အနံ့ ပါတာတော့ သေချာတယ်..
အသံဗလံကတော့.. ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိလို့ ရိုးနေပြီ ဆိုရမှာဘဲ.. အရင်က ပရိတ်ရွတ်ရင် အခန်းထဲမှာ ဘီဒိုကို လာလာထုတယ်.. အေး သိပြီ မထုနဲ့တော့ ဆိုမှ ငြိမ်သွားတယ်.. အမျှတောင်းတာနဲ့ တူပါရဲ့.. အခု နောက်ပိုင်း ဘီဒိုထု တဲ့ အသံတောင် မကြားရတာ ကြာပေါ့.. အခန်းထဲမှာ ပရိတ်ရွတ်တဲ့ အချိန်ဘဲ လာလာ ထုနေတာ..
အိတုန်.. ဘုန်းကြီးတပါး ဘလော့မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဘုရားရှစ်ခိုးလို့စံနုန်း ကိုက်ရင် မမြင်အပ်တဲ့ ပုဂိုလ်တွေ နတ်တွေ စောင့်ရှောက်တယ် လို နတ်တွေလာရင် အခန်းထဲမှာ မွေးကြိုင်တယ်လို့ ရေးထားတယ်။
အနံ့ ရရင် အမျှ ဝေလိုက်ပေ့ါ။ အိတုန်ရဲ့ ကုသိုလ်တွေ လိုချင်လို့ သတိပေး တာ ဖြစ်မှာပေ့ါ
ဆူးရေးထားတာဖတ်ပြီး လန့် စရာဘဲ
မကြောက်ပါနဲ့ ကာယကံရှင်တောင် မဖြုံတောင်.. ဟဲဟဲ.. နောက်များ ကြုံမှ.. ဆူးနဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့သော သရဲများ ဆိုပြီး ရေးရင်ကောင်းမလားလို့..
ဟို ပရ လောကသားတွေ အကြောင်း စုံ တော့မှာပေါ့ လုပ်ဗျာ ရေးကြပါ ကျွန်တော်က other dimensional world ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ပါ။
ဆေးရုံတွေဘာတွေမှာ ရတတ်တဲ့ ဆေးရုံနံ့ကြီး စူးစူးဝါးဝါးကိုရတာ
ကျွန်တော်လဲ ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထပြီး အိမ်ထဲကိုဝင်လာလိုက်ရတယ်..